SQ: Nagaa fi tasgabbii haaraa lammiilee Oromiyaaf argamsiisuuf Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa furmaata maayiiti. – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSQ: Nagaa fi tasgabbii haaraa lammiilee Oromiyaaf argamsiisuuf Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa furmaata maayiiti.
Nagaa fi tasgabbii haaraa lammiilee Oromiyaaf argamsiisuuf Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa furmaata maayiiti.
SQ – Onkoloolessa 30, 2020
Nageenya biyyittii keessatti dhabame addatti immoo Oromiyaa fi lammiilee Oromiyaa irratti ajjeechaa ,hidhaa,Saamicha, qe’eerraa buqqa’uu lammiileef furmaanni Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa ABOn labse irratti qaamotni hawaasaa hirmaannaa isaanii cimsanii dirqama isaanii yoo bahatan dararaan lammiilee Oromiyaa addattis Oromoota irratti raawwatamaa jiru xumura argata.
Hayyoonni,Abbootiin Amantii, Activistitootni, Artistootni, Abbootiin Gadaa,Abbootiin Qabeenyaa,Qotee bultootni fi qaamotni hawaasaa hanga filannoon haqaa biyyittii keessatti gaggeeffamutti fedhiin osoo hin taane jiraachuu lammiilee Oromiyaa dhugoomsuuf dirqama Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa kana tumsuu nurra jiraatu. Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa ABOn labse kun kan qaamotni hawaasaa hundi keessatti qooda fudhatan malee kana dhaabni kallacha ummata Oromoo ABO qofti ofii keessatti qooda isaa bahatu miti.
ABO waamicha dhiyyeesse furmaannii fi falli maayii Oromiyaa fi lammiilee Oromiyaaf nagaa fi tasgabbii dhabame deebisanii dandamachiisuuf Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa qofa hanga filannoon haqaa gaggeeffamutti kan jedhe haa tumsinu. Jireenya keenyaafis tahe jiraachuu keenyaafis wabiin nageenyi yoo jiraatedha nagaa fi tasgabbii haaraa lammiilee Oromiyaa maraaf akka jiraatuuf Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa tumsuun dirqama.
Kan hidhame haa hiikamu jechuuf Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa tumsinee akka hiikamu haa goonu.